मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा जन्मिएका विषम गौतम अहिले हाल अस्ट्रेलीया सिड्नीमा बसोबास गर्छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थायी ठेगाना भएका २८ वर्षिय विषम परदेशमा रहेर नेपाली गीत संगीत, कला र भेषभुसालाई जगेर्ना गर्ने सोचले ‘मायालु इन्टरटेन्मेन्ट’ मार्फत सक्रिय भइरहेका छन् । बिबिएस अध्ययन गरेका विषमले राज...
मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ६, फापरबारी तीनतले निवासी अनु राईलाई सामाजिक अभियानमा सरिक हुन रहर लाग्छ । नारी शिप सिर्जना केन्द्र नामक गैर सरकारी संस्थाको युवा परिचालक भएर गाउँमा मानव बेचविखन विरुद्दको अभियानमा काम गरेको उनीसंग अनुभव छ । अहिले २३ वर्षकी अनुले वि.सं.२०७१ सालमा स्थानीय जनता माविबाट एसएलसी गरेकी हुन् । हाल उनी...
मकवानपुरको हाडीखोलामा जन्मिएकी रुपा कार्की अहिले नारायणी कलेज हेटौंडामा बीबीएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छिन् । नारायणीबाटै दश जोड दुई उत्तिर्ण गरेकी रुपाले एसएलसी भने प्रगति उच्च मावि, हेटौंडा ९ बाट गरेकी हुन् । हाल हेटौंडा १, चाइनागेट निवासी २० वर्षिया रुपाले अञ्जन दाहालको ‘दूरी’, राज रानको ‘चाहिंदैन त्यो माया’, देवेन कार्कीको...
हेटौंडा ५, चिल्ड्रेनपार्ककी सन्ध्या पोख्रेल अहिले मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा नर्सका रुपमा कार्यरत छिन् । बाइस वर्षिया सन्ध्याले मकवानपुर टेक्निकल इस्टिच्युटबाट अनमी अध्ययन् गरेकी हुन् । आधुनिक राष्ट्रिय माविबाट २०६८ मा एलएलसी गरेकी उनले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा बीए अध्ययनरत छिन् । विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्घ भएर सामाजिक...
हेटौंडा २, वनस्खण्डी निवासी सविना तिमल्सिना मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा वी.ए. दोस्रो वर्ष अध्ययनरत छिन् । २३ वर्षिया सविनाले भुटनदेवी उच्चमाविबाट २०६९ सालमा एसएलसी उर्तीण गरेकी हुन् । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा अध्ययन गरेकी उनीसंग सञ्चारमाध्यमको कार्य अनुभव पनि छ । रेडियो मकवानपुरमा दुई महिना प्रशिक्षार्थी, रेडियो निकासमा ६...
तुलसी नेपाल, सामाजिक अभियन्ता हुन् । मकवानपुरको हेटौंडा, बसामाडीकी उनी अहिले व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर सकेर अहिले कानून विषय अध्ययनरत छिन् । सामाजिक सहजीकरणको अभियानमा लागेकी उनीसंग विभिन्न संस्थामा काम गरेका अनुभव छन् । वसामाडी विकास संस्थाले प्लान नेपालसंगको साझेदारीमा बालअधिकार र शिक्षा, कोसान सङघ अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार र हक...
मकवानपुरको हेटौंडा ४ की समीक्षा श्रेष्ठ मिलनसार छिन् । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेकी समीक्षालाई जीवनमा राम्रो काम गर्ने रहर छ । आफ्नो शिक्षा अनुसारको जागिर खाएर व्यस्त जीवन बिताउँने चाहाना राख्ने यिनीसंग हामीले जीवन, भोगाई., मायाप्रेम आदिका विषयमा छोटो कुराकानी गरेका छौं । तपाईको नाम समीक्षा, नामको अर्थ के हो नि...
‘माँया ! जीवन जीउने आधार हो । ’
मकवानपुर, हेटौंडाकी प्रमिला थिङ, लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छिन् । महिला सहकारीबाट सामाजिक अभियान बुझ्ने अवसर पाएकी उनी अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल मकवानपुरले सञ्चालन गरिरहेको भूकम्पपछिका कामबारे पारदर्शीता एवम् सुशासन सम्बन्धि परियोजनाको अधिकृतको जिम्मेवारीमा छिन् । उनीसंग जीवन अनूभूती लगायतका विषयमा...